Fijerena Moto E 2015 feno | Androidsis
Tsy misy isalasalana, ny iray amin'ireo zavatra resahina indrindra amin'ity tontolo adala Android ity, dia ny fampisehoana amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny fiarahamonina ilay vaovao sy andrasana Moto E ny taranaka faharoa, na fantatry ny rehetra amin'ny hoe Moto E 2015 vaovao. Fampisehoana ofisialy iray izay lavitra ny fampisehoana miharihary ao amin'ny lavarangana lehibe feno fakantsary fahitalavitra, nanaitra anay ny Motorola fampisehoana manokana sy tsy ara-potoana "Rahoviana ary aiza no tadiavintsika".
Raha ny mahazatra, alohan'ny hanaovana famerenana video na famakafakana smartphone na vokatra mifandraika amin'ny Android, dia manokana herinandro iray farafahakeliny amin'ny fotoako mba hitsapana azy tsara. Na dia niaraka tamin'ity Motorola Moto E 2015 ity aza aho dia afaka nahita zavatra mazava tsara hatramin'ny fotoana voalohany fa, tao anatin'ny 24 ora fampiasa fotsiny dia nanapa-kevitra ny handefa ity famerenana video ity na famakafakana ny Moto E 2015 aho.
1 Famaritana ara-teknika an'ny Moto E 2015
2 Ny tsara indrindra amin'ny Moto E 2015
3 Ny ratsy indrindra amin'ny Moto E 2015
4 Famaranana farany momba ity Motorola Moto E 2015 vaovao ity
Famaritana ara-teknika an'ny Moto E 2015
modely Moto E 4G
Rafitra fandidiana Android Lollipop
efijery 4'5 "miaraka amina vahaolana 960 x 540 QHD sy fiarovana Gorilla Glass
Rom 8 Gb azo itarina amin'ny karatra MicroSD hatramin'ny 32 Gb
Fakan-tsary aloha VGA
Fakan-tsary Rear 5 Mpx miaraka amina vava 2
Conectividad Wifi-Bluetooth-LTE-GPS sy a-GPS
lafiny 130 x 67 x 11'9mm
vidiny 129 Euros
Raha ny momba ny famaritana ny vokatra dia mazava fa tena biby izy izay mihoatra ny an'ny Android antonony ambany kokoa, Izaho manokana dia mametraka azy ao anatin'ny Android mid-range. Ary izany ve no vaovao Motorola Moto E 2015, ny hany zavatra manana low-end dia hitantsika hita taratra amin'ny vidiny ambany ihany izy io 129 euros.
Ny tsara indrindra amin'ny Moto E 2015
Ny tsara indrindra amin'ny Moto E 2015 Azontsika atao ny mahita azy amin'ny vidiny ambany, na dia misy aza ny zavatra maro izay nampiaiky volana ahy ny momba ity terminal Motorola vaovao ity dia azo fintinina amin'ireto seho manasongadina ny Moto E 2015 vaovao:
Ny dfamolavolana miaraka amin'ny famaranana kalitao sy kanto izay misy, izay mendrika hanasongadinana ny mety hanovana ny sisiny amin'ny bumpers tsara tarehy misy loko isan-karazany hisafidianana. Na ireo trano misy endrika sy fitaovana samihafa aza.
Standard miaraka amin'ny Android 5.0.2. Ny kinova farany an'ny rafitra fiasa Android hatramin'ny androany.
Fitahirizana anatiny zavatra mihoatra ny 5 Gb maimaim-poana, TSY Mizarazara, izay mitarika antsika hanana ny toerana rehetra misy amin'ny fametrahana ny rindranasa sy ny lalao.
Fakan-tsary 5 mpx aoriana tsara fa amin'ny toe-jiro tsara dia maka sary kalitao tsy mety resy.
Bateria 2390 mAh izay manome antsika fahaleovan-tena eo amin'ny 5 ora lava amin'ny fampiasana efijery.
Mpandrindra manaitra sy mahery Teknolojia 410-bit Snapdragon 64, Quad Core amin'ny 1,2 Ghz.
Fifandraisana 4G LTE.
Ilay nampanantenaina fanavaozana ny kinova Android vaovao mandritra ny roa taona farafahakeliny.
Ny refiny, terminal tsara ho an'ny olona izay tsy resy lahatra fotsiny tamin'ity fironana ity amin'ny fantsona mihoatra ny 5 ″ izay efa nentinay tao anatin'ny roa taona lasa.
Farany tsy azo resena io vidiny fandefasana 129 euro ihany.
Ny ratsy indrindra amin'ny Moto E 2015
Tena mila milaza izany aminao aho Betsaka ny zavatra tsy tiako tamin'ny Moto E 2015 vaovao, na dia toy ny amin'ny zava-drehetra aza dia misy izy ireo ary avy eo dia hatoniko:
Tsy asiana Flash Flash amin'ny fakan-tsary any aoriana. Zavatra iray izay mety ho ny ostia ahafahantsika maka sary kalitao na dia amin'ny toerana maivana aza.
Su bateria mitambatra. Batterie izay tsy azontsika idirana satria tafiditra ao anaty terminal.
Su fakan-tsary anoloana miaraka amin'ny vahaolana VGA ihany.
Fanapahana ny efijery QHD. Na dia tsy dia zava-dehibe loatra aza izany raha ny fandrefesana ny efijeryo, raha toa ka nampiditra efijery misy fehin-kevitra farafahakeliny HD izy ireo dia efa ilay reostia ilay terminal.
Famaranana farany momba ity Motorola Moto E 2015 vaovao ity
Ho famaranana izany Moto E 2015 famerenana, Mila milaza aminao aho fa amin'ny tsipika ankapobeny dia terminal iray tena mahaliana izy io, na ny fikajiana ara-teknika azy io izay mahazatra ny terminal Android midadasika, ary koa ny fampandehanana fampiharana sy lalao isan'andro, ary koa noho ny vidiny tsy hita lany izay misy. Terminal izay, araka ny efa nolazaiko anao teo aloha, no antsoina hoe terminal, manomboka izao, ho manjaka amin'ny ampahan'ny Android ambany.
Famaritana teknika ny tsara indrindra
Fanavaozana ofisialy Motorola
Fampisehoana bateria tsy azo resena
Fakan-tsary eo alohan'ny VGA
Fakan-tsary aoriana tsy misy flash LED
Efijery famahana QHD
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Motorola » [Lahatsary] Fanadihadiana Moto E 2015, notsapainay tsara ilay Motorola kely
cinemacomics dia hoy izy:
Raha apetrakao ireo lesoka napetrakao dia hivarotra ny Moto G 4G an'ny 2013 izy ireo
Valiny amin'ny cineycomics
maguiz dia hoy izy:
Nampiasa an'ity sela ity aho nandritra ny andro vitsivitsy ary tena tsara, na izany aza azoko lazaina fa any Arzantina dia miaraka amin'ny charger sy ny manual fotsiny ny boaty, tsy misy kojakoja, tsy misy headphone na tariby USB ary satria 4g dia sim kely kokoa efa nampiasaina! !! Tsy fantatro koa!
Fanontaniana momba ny slot havia havia inona izany? Ary fanontaniana iray hafa, ny fahafahako mampiasa ny tariby usb mitovy amin'ilay zava-manitra taloha xt300 motoroña ????
Valio i maguiz
Manontany anao aho hoe inona no fampiasana ny slot ankavia izay misy sombin-taratasy fotsy amin'ilay moto faharoa.